Android o zuva rekuburitsa: apa & apos; apo painogona kunge iri kurova anozivikanwa maturusi eApple
Kuru Nhau & Ongororo Android O zuva rekuburitsa: Pano & apos; apo painogona kunge ichirova anozivikanwa Android zvishandiso
Android O zuva rekuburitsa: Pano & apos; apo painogona kunge ichirova anozivikanwa Android zvishandiso
Parizvino, iro & apos; s ruzivo rweveruzhinji rwekuti Android O iri kuuya kune mudziyo padhuze newe munguva pfupi.
Kana chiitiko chedu chekare chiri chero chinhu chinopfuura, chete chidiki chidiki chevashandisi veApple ndivo vachange vachiwana iko kutsva kuravira kweApple pazuva 1 rekuwanika kweruzhinji. Vashandisi vePixel vari kuitora pakutanga, pasina kupokana nezvazvo, asi ndiani & apos; anotevera? Zvasara kuti zvionekwe.
Asi chii & & apos; s kukakavara nezvei? Ko Android O yakakosha kudzorera kune OS zvachose? Kune chikamu chikuru, izvo & maapos ave kuda kuunza mizhinji yepasi-pe-hood kuvandudzwa kweiyo OS, pamwe nekugadzirisa boka rezvinhu zvakakosha zveiyo Android ... zvakare. Izvo zviziviso zviri kuita zvine nharo zviri nani kupfuura pakutanga, uye isu tichawana zvakare yakagadziriswazve Menyu menyu iyo inoda kugara yakashongedzwa uye yakarongeka. Izvo & maapos anongoteedzera iwo tip echando, saka tinokurudzira kuti uenderere mberi uye utarise kuongorora kwedu kwakazara kweiyo Android O .
Asi, mumwe mubvunzo unokosha unosara ...
Android O iri kuuya riinhi?
Ngatibatsirei iwe neiyo - iyo yazvino ETA yatinayo yeGoogle & apos; s iri kuuya hombe vhezheni yeApple irikutanga-kusvika-pakati Nyamavhuvhu 2017.
Ichangopfuura runyerekupe kubva kune runyerekupe mill inoratidza kuti varidzi vePixel vanofanirwa kutarisira kuti Android O ichasvika seyakawedzera-mhepo mumavhiki ekutanga aAugust. Runyerekupe runotaura zvakare kuti hakuzove neyakagadziriswa Preview 4, kutenderedza huwandu hwevanhu betas kusvika vatatu. Parizvino, vanofarira veApple connoisseurs vari kunakidzwa Android O Ongorora Ratidziro 3 pamidziyo yavo inoenderana.
Zvese izvi zvinowirirana negore rapfuura & apos; zvingangoita zvisingatarisirwi uye kusvika kwekutanga kwe Android Nougat muna Nyamavhuvhu 22, 2016, nderupi rudzi rwekushamisa vamwe vanozvipira Android. Zvinotaridza sekunge Google iri kuvaraidza pfungwa yekuburitsa Android kare pane zvakajairwa kubva zvino zvichienda mberi, semakore apfuura, taiwanzo tora Android mukutanga kwekudonha, imwe nguva muna Gumiguru - Mbudzi hwindo.
Android vhezheni Zuva rekuburitsa
Android 4.0 Ice Cream Sandwich Gumiguru 18, 2011
Android 4.3 Jelly Bean Chikunguru 9, 2012
Android 4.4 KitKat Gumiguru 31, 2013
Android 5.0 Lollipop Mbudzi 12, 2014
Android 6.0 Marshmallow Gumiguru 5, 2015
Android 7.0 Nougat Nyamavhuvhu 22, 2016
Android 8.0 O Pakutanga kwaAugust 2017 *
* - Runyerekupe
Ndeapi mafoni achavandudzwa kuApple O uye riinhi?
Disiki: Heino inotevera tafura ine irwo ruzivo rwekufungidzira idzo & apos; s dzinoenderana nerunyerekupe uye nekufungidzira kwekutanga. Tichagadzirisa iyo posvo sezvo ruzivo rutsva ruchizowanikwa.
Google Pixel, Pixel XL - Kuva maGoogle & apos; zvishandiso zvawo, maPixels maviri anofanirwa kutanga kugamuchira Android O nekukurumidza kana maapos abuda zviri pamutemo.
Nexus 6P, Nexus 5X - Google & apos; dzaimbove mafoni emaficha angangotanga kugamuchira Android O mushure maPixels, asi inofanira kunge ichimhanya mushe gore risati rapera.
Google Pixel XL, Nexus 6P
Renyeredzi S8,Galaxy S8 +- Hapana ruzivo parizvino, asi tichitonga kubva pane zvatakamboona, Android O inofanira kuburitswa kumaoko asina kuvhurwa muna Ndira - Kukadzi 2018.
Galaxy Note 8 - Izvo & apos; s zvisingaite kuti Cherechedzo 8 ichauya ne Android O kunze kwebhokisi. Nekudaro, inogona kuzogamuchira iyo yekuvandudza na 2017 & apos; s kupera kana muna Ndira - Kukadzi 2018 mune yakaipisisa mamiriro ezvinhu.
Renyeredzi S7,Galaxy S7 kumucheto- Iwo aimbove-mureza ari pa backburner kana zvasvika kune software kugadzirisa. Hatidi kushamisika kana vakagadziriswa kuApple O munaKurume-Kubvumbi 2018.
Galaxy S6, Galaxy S6 kumucheto, Galaxy S6 kumucheto + - Android O ichave yekupedzisira huru software yekuvandudza yeaya matatu madhivhisi. Zvingangovarova imwe nguva muChirimo 2018.
LG V30 - Kune & apos; mukana wakakura LG V30 inogona kuve pakati pekutanga foni kutumira ne Android O kunze kwebhokisi, kuvaka paV20 gore rapfuura, yaive yekutanga foni neNougat pre-yakaiswa.
LG G6 - LG & apos; s mureza ungangowana Android O pagore & apos; s kupera, pamwe munaNovember - Zvita 2017. Kana chiitiko chedu chekare chiri chero chinhu chinopfuura , izvi zvinoshandawo kune dzinotakura shanduro dzemureza.
LG V20 - Hapana kutaurwa kana murume ane phablet ari kurapwa ku Android O, asi izvi zviri kuitika pane imwe nguva mukupera kwa2017 / kutanga kwa2018.
LG G5 - Kuona kuti iyo G5 yakagashira chete Android Nougat pakati paMay 2017, varidzi vayo vangangodaro vari kumberi kweimwezve yegore kumirira vasati vawana kuravira kweiyo Android O.
LG G6, LG V20
HTC U11 - HTC ine tsika yekuvimbisa kugadzirisa ayo epamberi mafoni kune yazvino Android vhezheni mumazuva makumi mapfumbamwe. Nekudaro, iyo HTC U11 ingangodaro mukwikwidzi wekutora Android O mukupera kwa2017.
HTC 10 - Sezvo zvairi & apos; iyo isisiri yakakodzera mureza mudziyo, iyo HTC 10 ingangowana Android O zvishoma gare gare pane iyo HTC U11. Pakutanga 2018 ndiyo yakaipa mamiriro ezvinhu.
HTC U11, HTC 10
Sony Xperia XZ Yekutanga- Shoko riri mumugwagwa ndereSony & apos; foni yazvino yepamusoro ichave iri kugamuchira Android O mukupera kwa2017, pamwe munaZvita.
Sony Xperia XZs - Ditto nezve maXZs.
Xperia XZ Yekutanga, Xperia XZs
OnePlus 5 - Iripo OnePlus 5 zvikamu zvinogona kunge zvichimhanya Android O na2017 & apos; s kupera.
OnePlus 3 / OnePlus 3T - OnePlus 'CEO Pete Lau akavimbisa kuti vaviri ava vachave ichimhanya Android O panopera 2017 . Ngationei & apos; tione kana ichi chivimbiso chichibata mvura.
OnePlus 5, OnePlus 3T
HMD Global inovimbisa kuti nhare dzese dzeNokia & apos; kusvika parizvino - Nokia 3, 5, uye 6 - ichave ichigadziriswa kuApple O, inova ndiyo nhau inogamuchirwa. Zvinosuruvarisa, hapana mafungidziro enguva windows, uye nekupihwa kuti mafoni-anofambiswa neNokia mafoni matsva matsva, hatina chikonzero chekufungidzira.
xfinity nhare vs verizon isina waya
yakanakisa giya s3 maapps 2018
Aya ndiwo akanakisa Lenovo Nhema Chishanu uye Cyber ​​Muvhuro madhiri
T-Mobile & apos; s yakachipa kwazvo zvirongwa zve5G zviri kuwedzera zvirinani nekusimudzira kwedata kunoshamisa
Heino maapos nei Google Nexus 6P neNexus 5X isinga & apos; isina kuwacha isina waya
Motorola Razr 2 zuva rekuburitsa, mutengo, maficha uye nhau
Maitiro ekumisa ega mapikicha kubva kuenzanirana kuenda kuGoogle Mifananidzo
Apple TV 4K 2021 vs Roku vs Chromecast vs Amazon Moto mutengo uye kutenderera
Apple inokurudzira iPhone Kuvandudza Vatori vechikamu kuti vatore foni nyowani kare